Iingcebiso zokuthambisa iindevu | Amadoda aQinisekileyo
Ukwenza i-cream yasekhaya esekwe kwi ibhatha yeshea ukuthambisa iindevu udinga iigrama ezingama-50 zebhotela ye shea, iimililitha ezingama-25 zeoyile yeavokhado kunye namathontsi amahlanu eoli ylang ylang. Le khrimu yenza i-cocktail yeevithamini ukuba inyibilikise kwaye uyithambise iindevu, Ukudibanisa izibonelelo ze shea kunye neavokhado, kunye nokuphilisa kunye nokubulala iipropathi zeoyile ylang ylang.
Zonke izithako zibethwa esityeni de kufunyanwe uhlobo lwekhrim etyiweyo, emva koko zibekwe kwisitya esingenanto esinokuvalwa ngomphunga. Ngaba cream Ingagcinwa ukuya kwiinyanga ezi-6 kwifriji.
Isebenza ngesisa kwi imaski kangangemizuzu engama-30 ukuya kwengama-40 emva koko uhlanjwe ngamanzi adikidiki.
1 Ioyile yendalo yekhokhonathi ukuthambisa iindevu
2 Ixolo leorenji ukuthambisa iindevu
Ioyile yendalo yekhokhonathi ukuthambisa iindevu
El ioli yonkcocon Iyaziwa ngokuthamba kweepropathi zeenwele kwaye kuyafana nokunyanga iindevu. Ukuyisebenzisa kwiindevu, shushu ioyile, emva koko uthambise ikama okanye ibrashi iindevu Ngeoyile yekhokhonathi. Emva koko kufuneka uhlambe iindevu. Emva koko, kufuneka kubenecompress yamanzi abandayo ukuvala ifayile ye- pores.
Ixolo leorenji ukuthambisa iindevu
Sisisombululo esisebenzayo sokuthintela iindevu pique. Ukuba une-blender ekhaya, kuya kufuneka ubethe i-orenji yexolo de ibe ngumgubo. Ukwenza oku, kuyacetyiswa ukuba ukomisa kuqala piel yeeorenji ukuze wonke ukufuma kuphume, emva koko kugqitywe kwi-blender de ufumane umgubo ocolekileyo. Isiqingatha sendebe yobisi ixutywe de kwafunyanwa i ipasta. Emva koko ifakwa ebusweni imizuzu engama-40 emva koko ihlanjwe ngamanzi ashushu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iingcebiso zokuthambisa iindevu
I-MYL Naturists sitsho
Mva kwemini, ndikhangela imveliso yendalo yokuthambisa iindevu, ukunqanda ukungcwaba nokucheba ayingcungcuthekisi. Ngaba ioyile yeavokhado inokufakwa endaweni yeoyile yejojoba okanye ioyile edibeneyo?
Phendula i-MYL Naturistas
Iikawusi ezingabonakaliyo, amaqabane afanelekileyo ngeebhulukhwe zamaqatha